Jikọtara: 29 Eprel 2015, 11:27
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Bobpa567 » 06 Julaị 2017, 16:14
Agbabala m ọdụ ụgbọ elu Fort Wayne Int Airport installer.into na nchekwa nke m. Ana m ebufe ihe nkiri / uda na nke m Addons folda. Mana n’ọnọdụ a, m na-ahụ na e mepụtara folda abụọ ịbụ (1) fort_wayne_intl_airport_fsx na (2) fort_wayne_intl_airport_fsx_part2. Kedụ ka m ga - esi chikọta Part2 Ha ekwesiri ịgwakọta dị ka a ga - asị na akụkụ nke abụọ bụ mmelite ma degharịa faịlụ ochie ahụ.
Onyinye ọ bụla masịrị ya!
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by rikoooo » 06 Julaị 2017, 16:48
Kedu ihe mere ị ga - eji wụnye ihe ngosi ahụ na aka gị? Onye na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ ọ bụla maka simulators ọ bụla dakọtara.
"fort_wayne_intl_airport_fsx" comes in first position and "fort_wayne_intl_airport_fsx_part2" comes in second position in your FSX Ọba akwụkwọ ahụaja.
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji aka gị rụọ ọrụ a, ị ga-eme ka nchekwa abụọ ahụ dị na ebe obibi mara mma.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Bobpa567 » 06 Julaị 2017, 16:58
Daalụ maka ozi gị. Ihe kpatara m ji chọọ ime ntuziaka bụ. Enwere m SDD raara nye m addon mma ma achoghi m ndi installers tinye faili di egwu na SSD nke nwere mmeri 10 na ya. M onye ọkachamara abụghị naanị na-eso ndụmọdụ nyere na forums ndị ọzọ wdg.